11 caqabadood Oo Haysta Real Madrid Kulanka Dortmund
HomeChampions League11 caqabadood Oo Haysta Real Madrid Kulanka Dortmund
Marka ay garoonkeeda Signal-Iduna Park Salaasada ku martigeliso Real Madrid, waxay Borussia Dortmund haysataa fursado badan oo u saamaxaya inay si sahlan ugu garaaci karayso Real Madrid.
11 sababood ayaa guusha Dortmund sal u noqon kara, kooxda tababare Zidane ee Madridna iyagoo ooyaya dib ugu celin kara caasimaddii ay ka tegeen ee Madrid.
1. Niyad-jabka labadii barbar dhac
Kusoo laabashada jidka guusha laba ciyaarood oo barbar-dhacyo ay la gashay Villarreal iyo Las Palmas kaddib, waxay fure u noqon doontaa isku kalsooni ay ku sii socon karaan ciyaaraha hadhay, laakiin marnaba niyad-jabka ay ka qaadeen guul la’aanta u dambaysay waxa laga dareemi doonaa iyagoo ciyaartoyga Real Madrid garoonka gudihiisa ku jira.
2. Xusuustii Sporting
Inkasta oo ay saddex dhibcoodba ka qaateen Sporting Lisbon kulankii u horreeyey ee Champions League, haddana ciyaarta Madrid waxbaa si’ ka ahaa. Saddexda dhibcoodba waxay gacanta ugu jireen Sporting ama inay kala qaybsadaan ayey ku sigteen illaa laga gaadhayey daqiiqaddii u dambaysay oo Madrid ay guusha heshay.
3. Maqnaansha Casemiro
Waxa laga yaabaa in ciyaartii ugu wanaagsanayd ee Casemiro uu u ciyaaro Real Madrid ay ahayd guushii ay ka gaadhay Dortmund rubuc-dhamaadkii Champions League ee 2013/14, una saamaxay Real Madrid in ay ku guuleysto La Decima. Waxa se murugo ay joogtaa hadda oo uu dhaaac ku maqan yahay, buuxinta booskiisuna ay adag tahay.
4. Khibradda iyo halista weeraryahannada Dortmund
Koox weyn oo haysata ciyaartooyo badan oo hibo ciyaareed leh ayaa sugaysa Los Blancos, taas oo ay hoggaaminayaan Andre Schurrle, Mario Gotze iyo Pierre-Emerick Aubameygan. Kulankoodii u dambeeyey ee Jimcihii 3-1 ayey ku dhirbaaxeen Freiburg. Sidoo kalena ciyaarihii Legia Warsaw iyo Darmstadt mid walba 6-0 ayey ku badiyeen.
5. Ahaada BBC ama ha ahaanina BBC
Karim Benzema gool ayuu u dhaliyey kooxdiisa kulankii Las Palmas, laakiin Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale kumay salaaxin. Haddii ay sidoodii hore ku soo noqdaan in uun bay kooxdoodu dhaqdhaqaaq samayn kartaa, haddiise bustihii qoyanaa ee toddobaadyadii u dambeeyey uu sii saarnaado, jab ayaa sugaya.
6. Qorshaha Labaad
Real Madrid ma heli doonto beddelka saxda ah ee Casemiro, laakiin waxa uu haystaa Zidane, kuna khasan yahay in uu u yeedho oo uu ku biixiyo safkiisa uu ku bilaabayo ciyaarta mid ka mid ah saddexdan ciyaartoy: James Rodriguez, Alvaro Morata iyo Mateo Kovacic. Isco ayaan isna meesha laga saari Karin.
7. isku-beddel difaac ah
Marcelo ayaa u jiifa dhaawac gaadhay, waxaana booskiisa u sharraxan inay buuxiyaan Danilo ama Nacho Fernandez, laakiin dhibaatadu waxay tahay midkoodna maaha bidixle dabiici ah, haddii Fabio Coentrao oo dhaawac muddo dheer ah ka soo noqday la safona waxay tahay khatar uu u badheedhayo Zidane oo ciyaartoyga dib ugu celin karta waadhkii uu ka soo baxay.
8. Weji geesinimo
Xidhiidhka dabiiciga dhabta ah ee Zinedine Zidane la leeyahay Ronaldo wuu sii adkaanayaa, waxaana soo baxay calaamado muujinaya in aanay isku fiicnayn. Laakiin sida muuqata, Ronaldo oo lama taabtaan u ahaan jiray tababareyaashii hore, mararka qaarkoodna aanay kuba dhici jirin beddelkiisa, Zidane weji geesinimo ayuu ku qaabilay, dibedda ayaanu dhigay sababtay doonto ha ahaatee.
9. Hal-xidhaalaha Goolka
Kiko Casilla ayaa ahaa goolhayaha kooxda intii uu xili ciyaareedkai socday, laakiin Keylor Navas ayaa dib ugu soo noqday garoomada qalliin lagu sameeyey kaddib, waxaana ay hal-xidhaale u tahay Zidane in uu kala doorto midka uu aaminayo.
10. Sixidda Pepe
Dhaawaca uu ku maqnaa toddobaad kaddib, Pepe dib ayuu u soo noqonayaa si uu kooxda u xoojiyo, sida muuqatana kooxdu kama maarmayso, taasi waxay ku khasbaysaa Zidane in uu kala doorto Sergio Ramos iyo Raphael Varane oo uu midkood tuuro.
11. Ciyaar 90 daqiiqo ah
Espanyol iyoVillarreal ba, qaybta hore ee ciyaarta way maamuleen, waxaana u raacday Las Palmas oo dawakhisay. Haddii ay Madrid doonayso inay guul gaadho waa inay ka fogaato in sidii kooxahaas oo kale ay u ogolaato Dortmund inay ciyaarta maamulato.
Somaliland Oo Tartan Heer Caalami Ah Ka Qeyb-galaysa Iyo Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Ciyaaraha Oo Ka War-bixiyay
Inter vs Udinese 1-3 – Highlights & Goals
16/12/2017 Abdiwahab Ahmed
“Qaniinyadii Suárez ayaa ka xumayd ta Diego Costa”- Pelé